Shiinaha HF300 Tusiyaha Miisaanka Wireless-ka oo leh Stylus Dot-matrix Mini-Printer warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Culus
Tusiyaha Miisaanka Wireless-ka ee HF300 oo leh Stylus Dot-matrix Mini-Printer oo ku dhex jira
Tusiyaha Heavye HF300 waa tilmaame miisaan caalami ah oo ku salaysan tignoolajiyada isgaarsiinta wireless, oo ay la socoto naqshad wareeg ah oo isku dhafan, waxqabad xasilloon oo la isku halayn karo, iyo shaqo awood leh.
Waxay u hoggaansamaysaa heerka qaranka GB/T 11883-2002 Miisaanka Crane Elektaroonigga ah, iyo xeerarka xaqiijinta mitirka ee qaranka JJG539-97 Miisaanka Dijital ah iyo shuruudaha kale ee farsamo ee la xiriira, oo la socda tignoolajiyada gudbinta xogta sare ee RF, iyadoo la raacayo xeerarka Raadiyaha Qaranka Guddiga Maamulka. Xidhiidhka wireless-ka ee laba jiho ah, waxa ay awood u siinaysaa in si isku mid ah loo xidho korantada, iyo isticmaale la habayn karo inta jeer ee raadiyaha iyada oo loo marayo tilmaame leh sifada iskaanka soo noqnoqda oo toos ah.
Daabacaheeda dhibco-matrix-ka ee EPSON waxay daabacdaa qoraal iyo muuqaal aan la dhaqin oo waara, taas oo ka dhigaysa sida ugu wanaagsan codsiyada kala duwan ee cabbirka halka xogta daabacaada laga rabo.
● Guryaha qaab dhismeedka kaarboon-birta, adkaysi u leh saamaynta iyo faragelinta elektromagnetic. Cabbir yar, oo ku habboon isticmaalka la qaadi karo.
● xagal daawashada aadka u balaadhan, shaashad LCD ah oo heerkulkeedu aad u balaadhan yahay oo leh xarfo waaweyn oo cad.
● Laydhka dhabarka ee LED-ka ee lagu dhex dhisay, oo ku habboon jawi mugdi ah.
6V/4Ah ku dhex-dhismay baytari-asiidh-ashito dib-u-ku-lacag la'aan ah dayactir awood-weyn ah in ka badan 6 maalmood oo shaqo.
● Tilmaanta degdega ah ee tusaha awoodda batteriga iyo miisaanka batteriga, oo ku habboon isticmaalayaashu inay hubiyaan inay ku dallacaan wakhtiga.
● 16-furaha kiiboodhka xuubabka leh ee degdega ah ee hawlgal ku haboon oo dabacsan.
● Qalad aad u hooseeya ama heerka guul dareysiga, awood xoog leh oo ka hortagga faragelinta, isticmaalka tamarta hoose, isgaarsiinta fogaanta.
● Waxay kaydisaa ilaa 1000 diiwaanka miisaanka, ilaa 256 qaybood oo alaab ah.
● Ku-dhismay isticmaalka tamarta aadka u hooseeya iyo jadwalka saxda ah ee waqtiga dhabta ah.
● Isticmaalaha-ku-habayn karo wakhtiga xidhitaanka tooska ah iyo wakhtiga xidhitaanka nalka dambe.
● Isgaarsiinta RS-232-duplex, oo ku habboon sabuuradaha dibadda, kombiyuutarada, iwm.
● Ku dhex-dhismay EPSON-dhibcaha-matrix printer oo leh qoraal iyo muuqaal kaydinta cad, aan la dhaqin oo muddada-dheer.
Hore: Taxanaha HF132 Multi-line Multi-line Computing Computing & Tirinta Tusiyaha oo wata Kiibadh Nambaro ah
Heerka Saxda ah: Fasalka III (ekv. ilaa OIML R76)
Xallinta Gudaha: 16 000 000 tirinta
Qiyaasta Qiyaasta: 10 cabbir/s
Tirada kanaalka RF: 16 ​​chs (dft.) / 64 chs (max.)
Xaddiga Soo noqnoqda: 433/470/868/915 MHz
Habka Habaynta: GFSK (Gauss Frequency Shift Keying)
Dareenka qaataha: ≤ -114 dBm
Nooca Daabacaadda: stylus dot-matrix EPSON M150-II
Xawaaraha Daabacaadda: 0.4 xariiq/sek
Ballaca Daabacaadda: 33mm
Nooca warqadda: 44mm±0.5mm×ø33mm
● Boodhadhka dhibcaha wireless-ka ee ikhtiyaarka ah, oo ku habboon akhrinta fogaanta.
H1 Iskeelka Crane Is haysta oo leh Xirmada Fog ee Infrared
Taxanaha HF12 Bandhig weyn oo tayo sare leh oo tayo sare leh...
D01 Nooca-yar oo cabirka laalaadinta leh ee Bluetooth-ka